ဗုဒ္ဓဟူးနမ် ပါတဲ့မင်းသားမှ သူမအတွက် အရမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မမဆောင်း – Cele Posts
ဗုဒ္ဓဟူးနမ် ပါတဲ့မင်းသားမှ သူမအတွက် အရမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မမဆောင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ မမဆောင်း ကတော့ ဒီကာလကြီးမှာတောင် ကြော်ငြာတွေ တောက်လျှောက် ရိုက်နေရဆဲ ပါပဲနော်။သူ့ရဲ့ စန်းဟာလည်း အသက်ကြီးလာလေလေ အရမ်းကို နာမည်ကြီးလေပါပဲနော်။ စကားပြောဆို ပုံကအစ ပရိသတ်တွေချစ်နေကြတာလည်း ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲနော်။
မမဆောင်းဟာ သူ့ကို ဝေဖန်သူများ ကိုလည်း အပြုံးလေးနဲ့သာ ဖြေရှင်းတတ်သူ ပါပဲနော်။ အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်း ရည်းစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဟေဠိလေးတွေ အမြဲပြောသွားလေ့ ရှိသူပါနော်။ အခုလည်း ပရိသတ်တွေကို အသဲယားအောင် နာမည်တစ်ခု ခန့်မှန်းခိုင်း ပြန်ပါပြီနော်။
နာမည်သုံးလုံးနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနမ် မင်းသားတစ်ဦးမှ သူမလှတာ လူတိုင်းသိတဲ့ အကြောင်း မမဆောင်းကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ် တဲ့နော်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း မမဆောင်းပြောတဲ့ မင်းသားဘယ်သူဖြစ်မယ် ဆိုတာသိရင် ပြောသွားကြပါဦးနော်….
ဗုဒ်ဓဟူးနမျ ပါတဲ့မငျးသားမှ သူမအတှကျ အရမျးဝမျးသာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ စကားတဈခှနျးပွောခဲ့တယျဆိုတဲ့ မမဆောငျး
ပရိသတျကွီးရေ မမဆောငျး ကတော့ ဒီကာလကွီးမှာတောငျ ကွျောငွာတှေ တောကျလြှောကျ ရိုကျနရေဆဲ ပါပဲနျော။သူ့ရဲ့ စနျးဟာလညျး အသကျကွီးလာလလေေ အရမျးကို နာမညျကွီးလပေါပဲနျော။ စကားပွောဆို ပုံကအစ ပရိသတျတှခေဈြနကွေတာလညျး ကံကောငျးခွငျးတဈခုပါပဲနျော။
မမဆောငျးဟာ သူ့ကို ဝဖေနျသူမြား ကိုလညျး အပွုံးလေးနဲ့သာ ဖွရှေငျးတတျသူ ပါပဲနျော။ အငျတာဗြူးတိုငျးမှာလညျး ရညျးစားနဲ့ ပတျသကျပွီး ပဟဠေိလေးတှေ အမွဲပွောသှားလေ့ ရှိသူပါနျော။ အခုလညျး ပရိသတျတှကေို အသဲယားအောငျ နာမညျတဈခု ခနျ့မှနျးခိုငျး ပွနျပါပွီနျော။
နာမညျသုံးလုံးနဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနမျ မငျးသားတဈဦးမှ သူမလှတာ လူတိုငျးသိတဲ့ အကွောငျး မမဆောငျးကို ပွောသှားခဲ့ပါတယျ တဲ့နျော။ ကဲ ပရိသတျကွီးလညျး မမဆောငျးပွောတဲ့ မငျးသားဘယျသူဖွဈမယျ ဆိုတာသိရငျ ပွောသှားကွပါဦးနျော….
သူမရဲ့ချွေးနဲစာလေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်မှာမနေလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်
မွေးနေ့ရှင်မပါဘဲ ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ ဦးမေတ္တာရဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာမွေးနေ့ပွဲလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ